Bank of England Keeps Rates Steady As It Awaits Impact of Johnson’s Election Win | Myanmar Business Today
Home Business International Bank of England Keeps Rates Steady As It Awaits Impact of Johnson’s...
Bank of England Keeps Rates Steady As It Awaits Impact of Johnson’s Election Win
The Bank of England kept interest rates steady December 19, saying it was too soon to gauge how much Prime Minister Boris Johnson’s election victory would lift the Brexit uncertainty that has hung over the economy.
Two of the BoE’s nine policymakers voted forasecond month inarow foracut to borrowing costs due to fears that Britain’s job boom is deteriorating.
But the majority tookawait-and-see approach at the penultimate rate-setting meeting for Governor Mark Carney, who is due to stand down on January 31.
“Effectively, the Monetary Policy Committee has taken some heart from developments over the past month or so, namely that the outlook for Brexit now looksabit clearer,” Philip Shaw, an economist with Investec, said.
After Johnson’s emphatic election win, Britain is on course to leave the European Union on January 31 withatransition deal, which the BoE said could reduce some of the immediate uncertainty hovering over businesses.
But many companies are already looking to the end of 2020, when they will face tariffs on exports to the EU unless Johnson succeeds in negotiatingatrade deal before then – or breaks his word and allows an extension to the transition period.
Last month the BoE forecast Britain’s economy would grow by just 1.2 percent next year, the weakest annual expansion since the global financial crisis.
On December 19, it cut its forecast for quarterly growth in the final three months of 2019 to 0.1 percent from 0.2 percent.
The BoE said there were further signs that Britain’s recently booming job market was going off the boil, but unit labor costs were still growing atapace that could push up inflation by more than it wants.
Inflation is currently running below the BoE’s2percent target at 1.5 percent. Butahandful of economists think the central bank could raise rates next year due to underlying pressures from the tight labor market and damage to productive capacity from Brexit.
Most, though, thinkarate cut is more likely and financial markets have been pricing inaroughly 50 percent chance ofasingle 25 basis-point rate cut before the end of 2020. That probability fell slightly after last Thursday’s announcement.
အင်္ဂလန် ဗဟိုဘဏ်သည် အတိုးနှုန်းများကို ပုံမှန်အတိုင်းပင်ထားရန် ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့က ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝန်ကြီးချုပ် Boris Johnson ၏ အနိုင်ရမှုက နိုင်ငံစီးပွားရေးကို ထိခိုက်စေသည့် Brexit ၏ မရေရာမှုကို မည်မျှ ဖယ်ရှားပေးမည်ဆိုသည်ကို တိုင်းတာရန် စောလွန်းနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ဗဟိုဘဏ်က ဆိုသည်။
ဗဟိုဘဏ် အကြီးအကဲ ကိုးဦးအနက် နှစ်ဦးက ဗြိတိန်၏ အလုပ်အကိုင်များပြားမှုမှာ လျော့ကျလာနေသည်ဟုသော စိုးရိမ်မှုများကြောင့် ငွေချေးမှု ကုန်ကျစရိတ်များကို ဒုတိယလတွင် ဆက်လက် လျှော့ချရန် မဲပေးခဲ့သည်။
သို့သော် အများစုမှာ စောင့်ကြည့်လိုသည့် သဘောရှိနေကြသည်။
“မကြာခင်က ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေများကြောင့် ကုမ္ပဏီများနှင့် အိမ်ထောင်စုများအကြား မူဝါဒ မရေရာမှု မည်မျှလျော့ကျလာသည်ဆိုသည်နှင့် ပတ်သက်၍ အထောက်အထားမရှိသေးပေ” ဟု ဗဟိုဘဏ်၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပြောဆိုထားသည်။
ဗဟိုဘဏ်မှ တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် အတိုးနှုန်း ထပ်မံ လျှော့ချမည်မဟုတ်ဟူသော သတင်းကြောင့် စတာလင်ပေါင် ဈေးများ မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး ဗြိတိသျှအစိုးရ၏ ‌ငွေတိုက်စာချုပ်ဈေးများ ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။
အမေရိကန်နှင့် တရုတ်အကြား ကုန်သွယ်ရေးတင်းမာမှုများ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ လျော့ကျလာသောကြောင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အလားအလာ တိုးတက်မှုရှိလာသည်ဟု ယူဆကြောင် ဗဟိုဘဏ်က ဆိုသည်။
သို့သော် လာမည့်နှစ်တွင် အတိုးနှုန်းများ တိုးမြှင့်မည့် အလားအလာ မရှိကြောင်း သိရသည်။
ရွေးကောက်ပွဲတွင် Boris Johnson အနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက်တွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံသည် ဥရောပသမဂ္ဂမှ နှုတ်ထွက်မည့် လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီး ထိုအနေအ‌ထားက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအကြား ပေါ်ပေါက်နေသည့် မရေရာမှု အချို့ကို လျော့ကျစေနိုင်သည်ဟု ဗဟိုဘဏ်က ဆိုသည်။
သို့သော် ကုမ္ပဏီပေါင်းများစွာကတော့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ လှမ်းမျှော်ကြည့်နေကြသည်။ ၂၀၂၀ နှစ်ကုန်ပိုင်းမတိုင်မီအတွင်း ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ရရှိအောင် Boris Johnson က စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါက ၎င်းတို့အနေဖြင့် ဥရောပသမဂ္ဂ၏ သွင်းကုန် အခွန်များနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ယခုသီတင်းပတ် ဗဟိုဘဏ် အစည်းအဝေးတွင် ‌ပေါ်လစီမိတ်ကာများဖြစ်သည့် Michael Saunders နှင့် Jonathan Haskel တို့သည် အတိုးနှုန်းထားများလျှော့ချရေးအတွက် မဲပေးခဲ့ကြသည်။
အခြား ခုနစ်ဦးကတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ ထိုကဲ့သို့သော အတိုးနှုန်းလျှော့ချမှုများ ပြုလုပ်ရန် စောနေသေးသည်ဟု ဆိုကြသည်။ Brexit အရေး မရေရာမှုများ လျော့ကျလာခြင်း၊ အစိုးရက ဘတ်ဂျက်သုံးစွဲမှု မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး နလန်ထူလာခြင်းတို့ကြောင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် စီးပွားရေး တိုးတက်မှု မြင့်လာနိုင်သည်ဟု ၎င်းတို့က ဆိုကြသည်။
ပြီးခဲ့သည့်လကတော့ ဗြိတိန်နိုင်ငံသည် လာမည့်နှစ်တွင် ၁ဒသမ၂ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်လာနိုင်သည်ဟု ဗဟိုဘဏ်က ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ အဆိုပါ ခန့်မှန်းချက်မှာ ကမ္ဘာ့ စီးပွားပျက်ကပ်အပြီးတွင် တိုးတက်မှုအနိမ့်ဆုံးလည်းဖြစ်သည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တွင်တော့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၏ နောက်ဆုံး သုံးလပတ်ကာလအတွင်း စီးပွားရေးဖွံံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မူလက သုည ဒသမ၂ ရာခိုင်နှုန်းဟု ခန့်မှန်းထားရာမှာ သုည ဒသမ ၁ ရာခိုင်နှုန်းရှိမည်ဟု လျှော့ချခန့်မှန်းခဲ့သည်။
SOURCEWilliam Schomberg and David Milliken (Reuters)
Vol7Issue 51
Previous articleFiat Chrysler and Peugeot Agree on Terms to Forge New Auto Giant
Next articleAfter Boeing Halts Max Production, Suppliers Wait for Fallout